Tommy's Love Stories: New Roommate - Chapter 4
ဒီလိုနဲ့ဘဲ မမအခန်းမှာ တူတူနေခဲ့တာ ၃ပတ်ကျော် ၄ပတ်ထဲရောက်လို. တစ်လပြည့်တော့မယ်။ ဒီရက်တွေအတွင်းမှာ မမနဲ့ ပိုလဲရင်းနှီးခဲ့ရသလို၊ မမအပေါ်လဲ ကျွန်တော် ပိုနားလည်လာတယ်။ မမက စိတ်သဘောထားဖြူစင်ပြီး အတွေးအခေါ်ပွင့်လင်းထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါ။ မမက ကြင်နာတတ်လွန်း၊ ဂရုစိုက်လွန်းလို. မမချစ်သူတွေက မမကို အလေးအနက်မထားချင်ကြဘူး။ မမက အရာရာမှာ ဂရုစိုက်ပေးတယ်၊ ၀န်တို သံသယတွေကင်းတယ်။ ချစ်သူအလိုကျ အလိုလိုက်ပေးတယ်။ သာမန်ယောကျာ်းတစ်ယောက်ထက် တော်တယ်၊ ပညာတတ်တယ်၊ ပိုက်ဆံချမ်းသာတယ်။ ဒီတော့ ထက်မြက်တဲ့ မိန်းမတွေကို သဘောမကျတတ်တဲ့ ယောကျာ်းတွေက မမကို အညှာလွယ်တယ်၊ ပျင်းစရာကောင်းတယ်ဆိုပြီး ပစ်ထားခဲ့တတ်ကြတယ်။ မမဘ၀က အထီးကျန်နေသူပါ။ သူ့မှာ သူငယ်ချင်းဆိုလို. မမငုဝါတစ်ယောက်ဘဲ ရှိရှာတာ။
ကျွန်တော်ကလဲ နားလည်ပေးသလို မမကလဲ ကျွန်တော့်အပေါ် အရင်ကထက် ပိုဂရုစိုက်ပေးတယ်။ သူအလုပ်နားတဲ့ရက်တွေမှာ အကသင်တန်းကိုသာ လာရုံမက၊ တခါတခါ စိတ်လိုလက်ရ ထမင်း၊ ဟင်းတွေ ချက်လာပြီး သင်တန်းက သူငယ်ချင်းတွေကိုပါကျွေးတယ်။ အခုဆို ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေတောင် မမမှ မမဖြစ်နေကြပြီ။
တနေ့ ညနေစာ စားအပြီး၊
“မမ ဒီနေ့ ရုံးနားက ဈေးထဲမှာ ဖရဲသီးတွေ ပုံရောင်းနေတာတွေ.လို. ၀ယ်လာတယ်… ညနေစာစားအပြီး..ဖရဲသီးစားရအောင်….”
“OK..မ… ကျွန်တော် ဖရဲသီးခွဲပေးရမလား….”
“နေပါ… ညည်းလေးက ဖရဲသီးခွဲတတ်လို.လား..”
“ဟီး…သေချာတော့ မသိဘူးပေါ့.. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က အားပိုရှိတယ်လေ…”
“အင်း… တူတူခွဲကြမယ်လေ… လာကူပေး…”
ဖရဲသီးခွဲတာ ခက်ခဲတဲ့အလုပ်မဟုတ်ကြပေမယ့် နှစ်ယောက်တူတူလုပ်ရတော့ ဘာရယ်မသိတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုလေးတွေ တိုးလာကြတယ်။
နှစ်ယောက်တူတူ Kitchen ထဲမှာ ဖရဲသီးတွေ ထိုင်စားကြတယ်… ပါးစပ်ထဲကဖရဲစေ့တွေကို မျက်နှာပေါ်မှုတ်ထုတ်တမ်းကစားကြတယ်… ဖရဲစေ့တွေ အောက်ပြုတ်မကျဘဲ မျက်နှာပေါ်အများဆုံးတင်ကျန်နိုင်ခဲ့တဲ့သူက အနိုင်ပေါ့….
ဖရဲသီးစားပြီးကြတော့ နှစ်ယောက်တူတူ ဧည့်ခန်းထဲမှာ TV ထိုင်ကြည့်ကြတယ်… မြ၀တီကလာတဲ့ ကိုရီးယားကားက နှစ်ယောက်လုံး အရမ်းကြိုက်နေတဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်နေတယ်..
မမက မင်းသားကိုကြိုက်ပြီး၊ ကျွန်တော်က မင်းသမီးကိုကြိုက်တယ်…
TV အစီအစဉ်ပြီးသွားတော့ အိပ်ဖို.ပြင်ကြတယ်….
မမက ရုတ်တရတ်ပြောတယ် “သော်သော်နဲ့ နေရတာ စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာ…”
ကျွန်တော် ပျော်သွားတယ်… “ကျွန်တော်လဲ မမနဲ့အတူနေရတာပျော်တယ်…”
“သော်သော်.. ညကို မမနဲ့တူတူလာအိပ်လေ… ငုဝါမရှိတော့ အိပ်ခန်းထဲမှာ မမလဲ တစ်ယောက်တည်းအိပ်ရတာ ပျင်းတယ်…”
“အာ…မအိပ်ချင်ပါဘူး… ကိုယ့်ဘာသာ အိပ်ပါ…” ကျွန်တော်ငြင်းမိတယ်… ဟုတ်တယ်လေ… မမက ရိုးရိုးသားသားခေါ်ပေမယ့် ကျွန်တော့်စိတ်က မရိုးသားတာ ကျွန်တော်အသိဆုံး…
“ဟာ…မရဘူးကွာ… မမတစ်ယောက်တည်းအိပ်ရတာ ပျင်းတယ်…လာပါဟာ..တူတူအိပ်ရအောင်…”
မမက အတင်းလက်ကိုဆွဲပြီး အိပ်ခန်းထဲကို ခေါ်သွားတယ်…
နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင်ကြီးပေါ်မှာ ကျွန်တော်အိပ်မပျော်နိုင်ဘဲ ရင်တွေခုန်နေခဲ့တယ်….
နံဘေးမှာတော့ နှစ်ခြိုက်စွာ ကလေးလေးတစ်ယောက်လို အိပ်ပျော်နေတဲ့ ကျွန်တော်ခိုးချစ်ရတဲ့ မမ…
မမမျက်နှာလေးကို ပြတင်းပေါက်ကလရောင်အကူအညီနဲ့ ကျွန်တော်ခိုးကြည့်နေခဲ့မိတယ်… မမက အိပ်နေတော့လဲ သိပ်ချစ်စရာကောင်းတာဘဲ…. ဒီလိုသာ ညတိုင်းတူတူအိပ်ရရင်မမရယ်..ကျွန်တော်တော့ ရင်ခုန်ရတာနဲ့ ရူးနိုင်တယ်….
Bed side table ပေါ်က ကျွန်တော့် Hand Phone က အသံမြည်လာတယ်… ဖုန်းကိုကြည့်လိုက်တော့ သူငယ်ချင်း ငြိမ်းချမ်း လှမ်းခေါ်နေတာ… ညတောင် ၁၁နာရီထိုးနေပြီ.. ဘာလို.ပါလိမ့်
“သော်သော်…မင်းအိပ်ပြီလား.. The Corner Bar ကိုလာခဲ့.. ငါတို. TB တွေ ပါတီလုပ်နေတယ်…”
“အေး… လာခဲ့မယ်… See you”
ကျွန်တော် ၀မ်းသာအားရ ငြိမ်းချမ်းလှမ်းခေါ်တာကို လက်ခံလိုက်တယ်… တကယ်ပါ ကျွန်တော် မမနဲ့ တစ်ကုတင်ထဲ တူတူအိပ်ဖို. မ၀ံ့ရဲသေးဘူး…
ကုတင်ပေါ်ကနေ ဖြည်းဖြည်းချင်း မမ မနိုးအောင်ထရင်း ဧည့်ခန်းထဲကို ထွက်ခဲ့တယ်… ဂျင်းဘောင်းဘီတစ်ထည်ကောက်စွပ်ရင်း၊ ကျောပိုးအိတ်ကို လွယ်ကာ တိုက်ခန်းလေးထဲကနေ ထွက်လာခဲ့တယ်….
Good Night မမ…
Ooop OoooP Oppa Ganagnam Style….~~~
Club ထဲမှာ Psy ရဲ့ နာမည်ကျော် Gangnam Style သီချင်းက ဆူညံစွာ လွင့်ပျံ.နေတယ်… မီးရောင်တွေလင်းလိုက်မှိတ်လိုက်ကြားမှာ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေကိုလိုက်ရှာမိတယ်…
Security Guard ကလွဲလို. ယောကျာ်းလေးမရှိဘဲ.. Club ထဲမှာ ကောင်မလေး လန်းလန်းတွေနဲ့ Tomboy အမိုက်စားလေးတွေက ဟိုတစ်တွဲ ဒီတစ်တွဲ….
“သော်ကြီး… ငါတို. ဒီမှာ…. “
အရက်ခွက်ကို လေထဲမြှောက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းက လှမ်းအော်တယ်…. သူ.ဘေးမှာလဲ ခပ်လန်းလန်း စော်တစ်ပွေ….
Bar Counter မှာ ထိုင်ထိုင်ချင်း ငြိမ်းချမ်းက လှမ်းမေးတယ်….
“Vodka နဲ့ ကျွဲရိုင်း စပ်ပေးပါ…”
Bar Tender ကိုဘဲ ကျွန်တော် တိုက်ရိုက်လှမ်းပြောလိုက်တယ်…
ခွက်ကျွန်တော့်လက်ထဲရောက်လာတော့ ခုန်နေတဲ့ရင်တွေ ငြိမ်သွားအောင် လက်ထဲကခွက်ကို တရှိန်ထိုးမော့ချဖြစ်တယ်…..
ရင်ထဲမှာ ပူဆင်းသွားပြီး၊ ခေါင်းထဲလဲ ပူထူသွားတယ်….
“ဖြည်းဖြည်းလုပ်မှ ပေါ့ကွာ.. မင်းဟာကလဲ…”
ငြိမ်းချမ်းက ကျွန်တော့်ကျောကို အသာပုတ်ရင်းပြောသည်။
ညက နက်သထက် နက်လာပြီ… သီချင်းတွေလဲ ပိုမိုမြူးကြွလာခဲ့ပြီ…..
ကျွန်တော်လဲ ဘယ်နှခွက်မြောက် Vodka ခွက်ကို သောက်မိနေလဲ မသိတော့….
သေချာနေတာတစ်ခုက ကျွန်တော်တို.တွေ Bar Counter မှာ မရှိတော့ဘဲ ကပွဲကြမ်းပြင်ထက်မှာ ရောက်နေကြပြီ…
သံစဉ်တွေနဲ့ စည်းချက်မညီစွာ ကနေကြသည်… သူငယ်ချင်းတွေကတော့ အတွဲတွေ ကိုယ်စီနဲ့….
“သော်ကြီး မင်းစော်မထားဘူးလား…” ငဖြိုးက သူ.ကောင်မလေးကို ရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းရင်း လာမေးသည်…
“No… I don’t want…”
“မင်း အဖြစ်မရှိတာ နေမှာပါကွာ… ဟားဟား….”
ကျွန်တော် ရုတ်တရက် ဒေါသထွက်သွားသည်….
“ ငါ အဖြစ်ရှိမရှိ သိချင်တယ်ပေါ့…. “
“ဟိတ်ရောင်တွေ.. ပေါက်ကရတွေ လျောက်မလုပ်နဲ့ ရပ်တော့…” ငြိမ်းချမ်းက ၀င်တားပေမယ့် နောက်ကျသွားပြီ…
ကျွန်တော် မျက်လုံးတစ်ချက်ကစားရင် ဝေ့ကြည့်လိုက်တော့ အနီရောင်ဝတ်စုံနှင့် မိန်းမလှလေးတစ်ဦး… ကပွဲကြမ်းပြင် အလယ်ခေါင်မှာ ဒေါင်းမလေးတစ်ကောင်လို လှပစွာကနေသည်… သူမနံဘေးမှာ TB တွေ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်က တွဲကခွင့်ကို စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်….
ကျွန်တော်ရုတ်တရက် အားလုံးကို ဆောင့်တွန်းပြီး သူမဆီ တည့်တည့်မတ်မတ်လျောက်သွားခဲ့သည်…
မျက်နှာချင်းဆိုင်ရောက်တော့ ဘာမှမပြောဘဲ သူမခါးကိုဆွဲပွေ.ပြီး နှုတ်ခမ်းကို တေ့ယူစုပ်နမ်းလိုက်သည်…
သူမလဲ ပထမတော့ ကြောင်သွားပြီး၊ ခဏနေတော့ နဲနဲရုန်းကန်မလိုနှင့် မရုန်း…..
ကျွန်တော် မူးမူးနှင့် သူမကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်နမ်းပစ်လိုက်သည်….
သူမအောက်နှုတ်ခမ်းကို စုပ်ယူနမ်းရင်း လျာကိုလဲ အငြိမ်မနေ ထည့်မွှေကစားလိုက်သည်။ လက်တွေကိုလဲ ခါးမှာတင်ငြိမ်မနေဘဲ အထက်အောက် စုန်ချည်ဆန်ကစားရင်း….
၀ိုင်းနေသောလူတွေ နံဘေးမှာ မှင်တက်အံ့သြနေကြသည်….
ခဏနေတော့ အနမ်းကိုရပ်ပြီးသူမကိုထားခဲ့ကာ Bar Counter ကို ပြန်ထွက်လာခဲ့သည်…. နောက်မှာတော့ သီချင်းသံတွေကို ကျော်ဖြတ်ကာ လက်ခုပ်သံတွေ ဆူညံပွက်လောရိုက်နေခဲ့သည်…
ကျွန်တော် ဘာမှ ဂရုမစိုက်ဘဲ နောက်ထပ် Vodka တစ်ခွက် ထပ်မှာသောက်ဖြစ်သည်…
“သော်ကြီး Congratulation….” ငဖြိုးက မကြည်မသာနှင့် လာပြောရင်း နံဘေးမှာ ၀င်ထိုင်သည်..
“Doesn’t matter…. ငါ toilet သွားလိုက်ဦးမယ်…” ဟု ပြောရင်း ကျွန်တော် ထထွက်လာခဲ့သည်…
@ Female Toilet
အိမ်သာထဲက ထွက်လာတော့ ခုနက အနီရောင်ကောင်မလေးက အပြင်တံခါးနားမှာ ရပ်စောင့်နေသည်….
ခေါင်းတချက်ငြိမ့်ပြရင်း ထွက်လာခဲ့ပေမယ့်… သူမက လက်ကို ဖမ်းဆွဲထားသည်..
“မင်း ခုနက ကိုယ့်ကို လူကြားသူကြားမှာ နမ်းသွားတာ အရမ်းစိတ်ဆိုးတယ်…”
“Sorry… ကျွန်တော် ဘာပြန်လုပ်ပေးရမလဲ…”
ကျွန်တော့်ကို နံရံဘက် တွန်းလိုက်ရင်း… သူမနှုတ်ခမ်းတွေ ကျွန်တော့်မျက်နှာနား ကပ်ရင်း တိုးတိုးလေးပြောလာတယ်….
ကျွန်တော်တို. နှုတ်ခမ်းတွေ ထိကပ်သွားပြန်တယ်… ဒီတစ်ခါတော့ ပိုပြီး ပြင်းပြင်းရှရှ…
ခဏကြာတော့ နှစ်ဦးသား ဘာမှ ပြောမနေတော့ဘဲ သူမကားဆီထွက်လာခဲ့တယ်….
ကားကို သူမစမောင်းနေပေမယ့် ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတာ မေးနေစရာမလိုတော့ဘူးလေ…..
သေချာတာ အချစ်ဟိုတယ် တခုခုဘဲ ဖြစ်မှာပေါ့…း)
Posted by Tommy Girl at 9:21 AM